A place to say something: မြင်မြင်ချင်း ချစ်တယ်
လူတိုင်း အချစ်ဆိုတာနဲ့ တစ်ခါတော့ ကြုံဖူးကြမှာပါ.. ကျွန်တော်စတင်တွေ့ခဲ့တဲ့ အချစ်ဆိုတဲ့အကြောင်း မပြောခင် တစ်ခုကြိုပြီး ၀န်ခံထားချင်တာတစ်ခုက ကျွန်တော်ဟာ “မြင်မြင်ချင်း ချစ်တယ်” ဆိုတာကို လက်ခံယုံကြည်တယ်ဆိုတာပါပဲ..
ဒါဟာ တစ်ကယ်ကိုဖြစ်ခဲ့တာပါ… ကျွန်တော့်လိုပဲ အခြားအခြားသောသူတွေလဲ ကြုံဖူးကြလိမ့်မယ်လို့ ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်…..
တော်တော့်ကို ထူးဆန်းတယ်ဗျာ… သူ့ကို မြင်မြင်ချင်းပဲ သူဟာ ကျွန်တော့်ဘ၀အတွက်ပဲလို့ ယုံကြည်မိတယ်.. သူ့မျက်ဝန်းတွေနဲ့ စတင်စုံတဲ့ အချိန်ပေါ့.. ပြီးတော့… သူပြုံးပြလိုက်တဲ့ အချိန်မှာ… ကျုပ်အသက်ရှူဖို့ ခဏမေ့သွားတယ်… ဘ၀တစ်လျောက်လုံး တစ်ခါမှ ဒီလိုခံစားမှုမျိုး မရှိခဲ့ဖူးဘူး…. အချစ်ဆိုတာ ဒါပဲလို့ တစ်ထစ်ချယုံကြည်မိတယ်….
ပြောပြရဦးမယ်.. တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် စတွေ့ကြချင်းတော့ (ဟီး..) တော်တော်ရှက်တာဗျ.. ပထမဆုံး တွေ့ဖူးတာလေ… မျက်လုံးချင်းဆုံမိရင် ရင်ခုံရလွန်းလို့ မဆုံမိအောင် မကြာခဏကြိုးစားပေမယ့် သူ့မျက်ဝန်းတွေကိုပဲ စုံမက်နေမိတယ်…
သူကျွန်တော့်ကို ကျောခိုင်းပြီးသွားတော့ နောက်ကနေ ဆက်ပြီးကြည့်နေမိတယ်… အသက်ရှုခြင်းဟာ သူနဲ့အတူ ပါသွားသလိုပါပဲ… ဒါဟာ ကျုပ်တို့နှစ်ယောက် ချစ်သူတွေဖြစ်သွားကြဖို့ စတင်ခြင်းပဲလို့ ခံစားမိလိုက်တယ်… ကြည်နူးတဲ့ခံစားချက်တွေ… အင်း…. တစ်မျိုးပဲဗျ… သိပ်မပြောတတ်ဘူး.. သေချာတာကတော့ သူဟာကျွန်တော့်ကို ဟန်ဆောင်မှုကင်းမဲ့စွာနဲ့ပဲ စွဲလန်းစေခဲ့တယ်… အဲဒီအချိန်ကစပြီး ကျွန်တော်ဟာ ထူးခြားဆန်းကြယ်သော.. တိကျစွာအဓိပ္ပယ်ဖွင့်ရန် ခက်ခဲသော… အချစ်ဆိုတဲ့အရာနဲ့ စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့တဲ့နေ့မှာပဲ သာမန်ခံစားချက်တွေနဲ့ မတူညီသော ပျော်ရွှင်မှု/တမ်းတမှု တစ်စုံတစ်ရာကို စတင်ခံစားရတော့ တာပါပဲ..
ခုချိန်ထိပေါ့ဗျာ…. သူ့မျက်ဝန်းတွေနဲ့ စတင်စုံခဲ့တာတွေ.. သူပြုံးပြလိုက်တဲ့ နူးညံ့ခြင်း တစ်စုံတစ်ရာတွေဟာ… သိပ်ကိုမကြာသေးတဲ့ စက္ကန့်အနည်းငယ်က ဖြစ်ပျက်ခဲ့သလို ပျော်ရွှင်နွေးထွေးမှုကို ခံစားနေရတုံးပါပဲ… အဲဒါတွေကတော့ ကျွန်တော်နဲ့ စတင်သိကျွမ်းခဲ့တဲ့ “မြင်မြင်ချင်း ချစ်တယ်” ဆိုတဲ့ ခံစားချက်ပါပဲ……
ဪ… ၀န်ခံစရာ တစ်ခုရှိသေးတယ်… အဲဒီနေ့ အဲဒီအချိန်ကပြီး ကျွန်တော်သူ့ကို တကယ်ချစ်သွားတယ်.....
Posted by ko ye at 10:33 AM
Labels: သို့... ကောင်မလေး
So did u win her heart?
Wish u to win her heart...